Galchiiwwan Kasaa Hiikuu
Jecha cuqaasi, ykn jechoota akka galchii kasaatti fayyadamuu barbaadde galmee kee keessaa fili.
Jijjiiramota galmee kee keessaa dhoksuuf Mulataalafili.
Galchiiwwan Gabatee Qabiyyeewwanii Hiikuu
Gabatee qabiyeewwanii uumuuf karaa filatamaan akkaataalee keewwata mataduree durmurtaawoo, kan akka "Mataduree 1", gara keewwatawwan gabatee qabiyyeewwanii keessatti qabachuu barbaadde irratti fayyadami.
Akkaataa keewwata maamiloo akka gabatee galchii qabiyyeewwaniitti fayyadmuuf:
Akkaataa keewwata gabatee qabiyyeewwanii kee keessatti dabaluu barbaaddu kan Akkaataa Keewwata keessa jiru fili.
Tarree Sadarkaa keessaa, sadarkaa sadarkaawa akkaataa keewwataa itti hojjachuu barbaaddu cuqaasi.
Tolee cuqaasi. Amma akkaataa matadureewwan galmee kee keessatti fayyadamuun gabatee qabiiyyeewwanii kee keessatti isaan dabaluu dandeessa.
Title is: Galchiiwwan Kasaa ykn Gabatee Qabiyyeewwanii Hiikuu